प्रदेश १ मा १ सय ५५ संक्रमित थपिए, ५२ जना डिस्चार्ज | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. सोमबार, भाद्र २२, २०७७ १६:१३:२०
विराटनगर, २२ भदौ । प्रदेश १ मा आज १ सय ५५ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । दैनिक संक्रमणमा यो अहिले सम्मकै उच्च हो । मोरङमा ६७, सुनसरीमा ६६, झापामा १५, पाँचथरमा ६ र उदयपुरमा १ जनामा संक्रमण देखिइको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।